Namoota Hedduu: Waxabajji 3/2018 Dhimma ajjeechaa hojji geggeessa warshaa simiintoo DANGOTE mr. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNamoota Hedduu: Waxabajji 3/2018 Dhimma ajjeechaa hojji geggeessa warshaa simiintoo DANGOTE mr.
Namoota Hedduu: Waxabajji 3/2018 Dhimma ajjeechaa hojji geggeessa warshaa simiintoo DANGOTE mr.
Namoota Hedduu: Waxabajji 3/2018 Dhimma ajjeechaa hojji geggeessa warshaa simiintoo DANGOTE mr. Deep kaamraa sanaan wal qabatee jarri lubbu nama kana ofumaa gaalafattee hawaasa naannoo akka malee jeeqaa jirtii. Kanuman wal qabatee uummata jeequufi basaasuuf Meettaa Roobii, Meettaa Walqixxee fi Ada’aa Bargaa keessatti namoota hedduu bobbaaftee jirti.
Namichi maqaan isaa Inispeektar KAASAYEE MAGARSAA jedhamu warshaa DANGOTE keessatti hogganaa tikaati (sekuriiti)ti. Poolisii Oromiyaa irraa ari’amee ture. Amma DANGOTE keessaa fi alaa namoota hedduu waraana TPLF hordofsiisaa jira. DANGOTE keessatti dorgommii fi beeksisa tokko malee seene. Dhimmi namicha kanaa baay’ee cimaa dhufe. Namni kun yeroo itti gaafatamummadhan Godina Shawaa Lixaa hogganaa turetti akkatti godina gale seenaa bal’aa qaba. Ammas hubachiisaf ajjeechaa kana kan raawwate waayyanee fi jala deemtuu waayyanee akka ta’ee ifa.
Ofumaaf yakka raawwatanii ummata keenya doorsiisuu fi reebuun yoo dhabachuu baatee rakkoo cimaan muudachuun waanuma hin oolle. Kan irraa of oolchuuf DANGOTE fi Aanaa Ada’aa keessatti dhimmi kuni furmaata argachuu qaba. Haaroomsi wanti jedhamu kunis Aanaa sana keessa hin jiru. Ittumaa ummatni gaaga’amaa jira. KAASA’EE MAGARSAA fi fakkaattoonni isaa warshaa keessaa fi Aanaa keessa warri jirtan waan dhufuuf of qoopheessaa. Bakakkaa samii irraa dhufee manni fi namnii hin dhoowwu.
Gabaasaa Qeerroo Bilisummaa Mogoor irraa.
Rakkoo saamichaa lafaa Magaalaa Bishooftuu keessaatti babaldhachuu waliin walqabatee uummatni Oromoo Magaalaa bishooftuufi naannawaa ishee jiraatu abbaan